Rehefa mandinika ny zava-misy iainantsika hatramin’izao aho dia tena manahy mihitsy hoe mbola mitombina amin’ny ankamaroantsika na dia ianareo ao ambony ao aza iny hira iny. Isika aloha tena hitako diso mankalaza ny any loatra mihitsy e ! Tsy vitan’izay fa mbola tezaina hanonofy ny zava-misy any ihany foana koa ny kilonga eto an-tanàna. Fony ianao narovana tanaty trano fitaratra tetsy Mahasina izao dia mailaka ery ilay zanakao iny nilaza hoe ohatry ny any andafy, hono, ireny e ! Fa rehefa any angaha ry Jean dia tsy maintsy filamatra daholo na dia hita ho mamboly hantsana amin’ny mpitondra sy ny entina aza a ? Ianareo ve tsy mahita hoe arakaraka ny hanaovanareo an’ireny no vao mainka mandrangitra ny sasany hanao ratsy ? Dadafily aza anie ry Jean nandeha an-tongotra niantsena tamin’ny fotoan’androny nefa ohatra anareo ihany e ! Ilay vazaha alainareo tahaka iny koa izao tsy naninona akory nefa tsy naranty tanaty fitaratra toa anareo.